Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fandinihana ny homamiadan'ny prostate: Lehilahy, izao ny fotoana
Ny volana Novambra no fotoana tokony hijerena ny fahasalamany ny lehilahy rehetra, anisan'izany ny veterana. HALO Diagnostics, mpisava lalana amin'ny fitiliana sy fitsaboana homamiadana prostate, dia manentana ny lehilahy 45+ mba hanao fitiliana prostate tsy tapaka.
Lehilahy 250,000 eo ho eo no ho voan'ny kanseran'ny prostaty isan-taona - eo amin'ny 11,000 eo ho eo amin'ireo voan'ny aretina no ao amin'ny rafi-pitantanana ny fahasalamana Veterans irery.
"Mampihena 25-30% ny taham-pahafatesan'ny homamiadan'ny prostaty amin'ny alalan'ny screening", hoy ny Dr. John Feller, mpiandraikitra ny fitsaboana ao amin'ny HALO Diagnostics.
Ny Dr. Feller dia manoro hevitra fa ny mpitsabo biby dia hifanampy hahatsiaro ny maha-zava-dehibe ny fitiliana prostate ho an'ny lehilahy 50-75 taona (40-45 taona ho an'ny lehilahy atahorana kokoa). Nanampy izy hoe: "Ny fikarakarana ny veterana dia mampahatsiahy ahy foana ny fahatsapana lalina momba ny fiaraha-monina sy ny tanjon'ny veterana rehetra."
Michael Crosby, Tale Jeneralin'ny Veterans Prostate Cancer Awareness Foundation ary iray amin'ireo mararin'ny Dr. Feller, dia nilaza hoe: "Ny fifampitokisana eo amin'ny mpikambana ao amin'ny sampan-draharaha mitam-piadiana dia zavatra sarotra ny hamantatra."
Nanampy i Crosby hoe: "Manomàna fotoana miaraka amin'ny mpitsabo voalohany anao amin'ny fikarakarana ara-batana isan-taona, ao anatin'izany ny fitsirihana ra homamiadan'ny prostate, ny fanadinana rectal nomerika ary ny fifanakalozan-kevitra momba ny olana momba ny homamiadan'ny prostaty."
Ny HALO Diagnostics dia manolotra fitiliana prostate ao amin'ny tranokala HALO any Indian Wells, California, ary ny HALO's Prostate Laser Center any Houston, Texas.
Ny screenings dia misy:
• Fitsapana PSA: Atolotra ho an'ny lehilahy rehetra 50+ sy lehilahy 45+ manana tantaram-pianakaviana voan'ny homamiadan'ny prostate.
• Multiparametric Magnetic Resonance Imaging (mpMRI): Ny mpMRI dia fitaovana fitiliana avo lenta kokoa ary manavaka ny homamiadana mahery vaika sy mihamitombo.
• Biopsy amin'ny ranon-javatra: Fitsapana fisotron-drivotra manombana ny mety ho voan'ny homamiadan'ny prostaty ny lehilahy. Ampiasaina alohan'ny mpMRI sy alohan'ny biopsy.